Somalia oo xubin ka noqotay International Telecommunications Satellite Organization (ITSO). – Radio Muqdisho
Sii hayaha Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo safar shaqo ku jooga Washington ayaa waxaa uu u gudbiyey waraqahii aqoonsiga ee Somalia xubin uga noqon lahayd Ururka Maamula Isgaarsiinta Satellitya addunka, International Telecommunications Satellite Organization (ITSO). Waxay arintan gacanta Dawlada Soomaliya soo gelin doonta maamulda iyo ogolaanshaha xidig cagmaydka (Satellites) dul mara hawada dalkeena.
ITSO Director General, Mr Jose Toscano oo wasiirka ku martigaadayshirkan, kuna soo dhaweeyey xafiiska ku yaala Washington ayaa faah faahin dheer ka siiyey muhimmada ay u leedahay in dawlba walba heshiis la gasho dawlada ama shirkadaha private ee xidig gacmeedyadooda dul maraan, si aysan spectrum and frequency wadanka aysan interference ugu sameeyn. Aritan waxay muhiim u tahay dejinta iyo helida igaarsiin nadiif ah oo lahahyn dhawaq hoos u dhiga habsamida isgaarsiinta.
Wasarada ayaa furi doonta xafiis arimahan u gaar ah oo maamula heshiisyada isgaarsiinta satellityada ee dalka durmara. Waa markii ugu horeeysay in Soomlaiya arintan ay maamulkeeda la wareegto.
Wasiirka ayaa bishii la soo dhaafay sidoo kale ku guulaystay in wasaarada bilawdo hawsha ‘type approval’ oo mar dhaw la soo tababari doono shaqaala wasaarad ka tirsan lgu soo tababari doono UAE. Hawshan ay wasarada bilaabi doonto mar dhaw ayaa waxay maamuli doonta waxii qalab isgaarsiin ee dalka soo gala, si looga hortago inaan qalab aan wadanka ku haboonayn uu yimaado.